Lumbini Times | Nepal's Independent News Portal. Lumbini Times::Nepal's Online News Portal :: Lumbinitimes
नियम एवं शर्त
कार्यालय सरेको सूचना बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ९ मा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गतको सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालय बुटवलकै वडा नं १३ बेलबासमा सरेको हुँदा सम्पूर्ण सेवाहरु मिति २०७९।०३। २० गते सोमबारदेखि सोही स्थानबाटै लिनुहुन अनुरोध छ । हाल सञ्चालन भइरहेको सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा नयाँ कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गरिएको छ । यस प्रणालीमा ७० प्रतिशत अंकमा उत्तिर्ण हुने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ विचौलियाको भर नपरी सीप सिकेर सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सबैमा अनुरोध छ । तेजनारायण यादव कार्यालय प्रमुख यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बुटवल ।
शिक्षकले पोर्न साइटमा गणितको कक्षा चलाएपछि ! बुधबार, कात्तिक १०, २०७८
विश्वमै दुर्लभ चरा बारेकोटमा बुधबार, साउन ६, २०७८
अर्पणद्वारा स्मरण शक्तिमा विश्व कीर्तिमानको दाबी आइतबार, साउन ३, २०७८
गाईले नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि‍‍‍‍‍‍‍‍.... पोखरा महानगरपालिका—२१ फेदीपाटनका मुक्ति पौडेल कात्तिकको अन्तिममा व्याउनुपर्ने गाईले छ महिनाअघि नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि दङ्ग छन् । विसं २०७७ माघ २ गते परम्परागत तवरले बहर लगाएर प्रजनन् गराइएको गाई आगामी कात्तिकमा व्याउने भन्दै ढुक्क बनेका पौडेललाई जेठको २६ गते राति एकाएक गाईको थुनबाट दूध गोठमा आफैं झरेको देख्दा अचम्भित बने । शनिबार, असार १२, २०७८
दक्षिण अफ्रिकी महिलाले १० सन्तान जन्माएको खबर झुटो दक्षिण अफ्रिकाकी एक जना महिलाले यसै महिनाको सुरुमा १० वटा बच्चा जन्माएको दाबी असत्य रहेको एउटा आधिकारिक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। बिहीबार, असार १०, २०७८
अनौठो प्रेमजोडी: १२३ दिनसम्म 'हतकडी', त्यसपछि ब्रेकअप ! हातमा चेन बाधेर एक अर्कासँग रहने कसम खाएका एक जोडीले अन्ततः बन्धन तोड्दै चेन काटेका छन् । युक्रेनका एक जोडीले आफ्नो प्रेमलाई बलियो बनाउन भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर एक अर्कालाई चेनमा बाँधेका थिए । तर, १२३ दिनमा उनीहरुले उक्त चेन काटे । चेन काट्नेवित्तिकै एक अर्कासँग ब्रेकअप पनि गरे । सोमबार, असार ७, २०७८
यादवको सोख 'नङ पालेर विश्वमै चिनिन्छुु ' दिनेशसिंह यादवले लामा नङ पालेर विश्वमै देश र मधेशको नाम उच्च पार्ने धोका राखेका छन् । बिहीबार, माघ १५, २०७७
प्रेमीले समय बर्बाद गरिदिएको भन्दै मुद्दा प्रेमीले भने आफू आर्थिक कारणले तत्काल विवाहका लागि राजी नभएको जानकारी दिए । स्थानीय प्रचलन अनुसार हर्बर्टले दाइजोको रकम पनि स्विकारिसकेको ती युवतीले बताएकी छिन् । आइतबार, मंसिर २८, २०७७
अमेरिकामा ६१ वर्षीय हजुरआमाले आफ्नै नातिनी जन्माइन् एक ६१ वर्षीय महिलाले आफ्नो समलिङ्गी छोरा र उनको श्रीमान्‌को सरोगेट आमा बन्दै आफ्नै नातिनी जन्माएकी छन्। आइतबार, मंसिर २१, २०७७
एउटै परेवाको मूल्य झण्डै २३ करोड ! बेल्जियममा एउटै पोथी परेवा नेपाली रुपैयाँ २३ करोड ५७ लाख हाराहारीमा बिक्री भएको छ । बेल्जियममा भएको डाक बढाबढ क्रममा ‘न्यु किम’ नामक परेवीले यति धेरै मूल्य पाएकी हो। मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
पोथीको खोजीमा तीन हजार किलोमिटर यात्रा गरेको बाघ भारतमा अभिलेख राखिएको मध्ये सबैभन्दा लामो यात्रा गरेको बाघ एउटा संरक्षित क्षेत्रमा अहिले एक्लै बसिरहेको छ। बिहीबार, मंसिर ४, २०७७
२८ वर्षीया युवतीले जन्माइन् ५ शिशु काठमाडौं थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा एक महिलाले पाँच जना शिशुलाई जन्म दिएकी छिन्। पाँचमध्ये एक जना शिशुको भने अपरेसनअगावै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले पाँच शिशु जन्माएकी अस्पतालकी निर्देशक संगीता मिश्रले बताइन्। मंगलबार, असोज २०, २०७७
कुखुराको जोडी चल्लालाई पाँच हजार ! दुई वर्षअघि रैथाने साकिनी जातको कुखुरापालन व्यवसाय थालिएको ‘सापकोटा कृषि फार्म’मा अहिले दशथरी पन्छी छन् । आठ कुखुरा र दुई चरा प्रजातिका । आइतबार, भदौ २८, २०७७
पास्टरले सात दिनपछि जिउँदो हुने भनेपछि पाँच दिनसम्म घरमै लास राखियो कैलाली-कैलालीको टीकापुर–१ गणेशपुर शिविरमा मरेको मानिस जिउँदो हुने विश्वासमा पाँच दिनसम्म लास घरमै राखिएको छ। स्थानीय दीपक चौधरीको घरभित्र शव गन्हाउन लागेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गर्दा लास रहेको रहस्य खुलेको हो। बुधबार, साउन २१, २०७७
जब एक युवती विरोधका लागि निर्वस्त्र सडकमा उत्रिइन् ! अमेरिकामा नश्लीय विभेदको विरोधमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । विरोधका अनेकन शैलीहरु देखिन्छन् । तर शनिबार राति अमेरिकाको पश्चिम तटीय शहर पोर्टल्यान्डमा भएको विरोध प्रदर्शनमा एउटा यस्तो दृश्य देखियो, जसले सारा संसारको ध्यान खिंचेको छ । बुधबार, साउन ७, २०७७
ब्राजिल सरकारले भन्यो-बिहेअघि यौनसम्पर्क नगर्नु ! ब्राजिलको सरकार आजकाल आफ्ना देशका किशोर किशोरीका लागि निकै चिन्तित छ । वास्तवमा, ब्राजिलमा किशोरीहरु गर्भवती हुने दर अत्यधिक बढिरहेको र एचआईभी संक्रमणमा पनि वृद्धि भइरहेका कारण युवालाई यौन सम्बन्धका लागि विवाहसम्म प्रतिक्षा गर्न सन्देश दिइरहेको छ । सोमबार, माघ १३, २०७६
यी सुन्दर महिला, ६ पति, ३ बच्चा, आइन्स्टाइनजस्तो दिमाग ती महिला संसारकै सुन्दर महिला मात्रै थिइनन्, आफ्नो समयकी सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री र अहिलेसम्मकी सुन्दर आविष्कारक पनि हुन् । शनिबार, माघ ११, २०७६
दुलाहा-दुलहीले लगाइदिए प्याजकाे माला, 'गिफ्ट' पनि प्याज नै एक वैवाहिक समाराेहमा दुलाहा दुलहीले एकअर्कालाई प्याज र लसुनकाे माला लगाइ दिएका छन्। शनिबार, मंसिर २८, २०७६
विवाहमा साढे दुई किलो प्याज उपहार ! एक जोडीलाई विवाहको उपहारस्वरुप प्याज दिइएको छ । बिहीबार, मंसिर २६, २०७६
७० करोड वर्ष अगाडि सर्पका खुट्टा थिए सर्पका जीवाश्मको नयाँ अध्ययनबाट सर्पहरुको खुट्टा भएको पत्ता लागेको हो। सोमबार, मंसिर ९, २०७६
श्रीमतीका पूर्वप्रेमीसँग बिहे गराईदिन राजी भए श्रीमान् ! भारतको मध्यप्रदेशको राजधानी भोपालमा एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले श्रीमतीलाई प्रेमीसँग विवाह गराइदिनका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार, मंसिर ९, २०७६
यी युवतीले कमाउँछिन् घण्टाको १२ लाख ! एक युवतीले एक घण्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, बास्तविकता यस्तै छ । आइतबार, मंसिर ८, २०७६
सुँगुरको रगतले नदी नै रातो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमा नजिकै रहेको नदी इमजिन रगतले राताम्य भएको छ । बुधबार, कात्तिक २७, २०७६
विश्वकै पहिलो उड्ने ट्याक्सी ! आउने वर्षहरूमा उड्ने ट्याक्सी यथार्थ हुने अपेक्षा बढ्दै गएको छ। लिलियमजस्ता कम्पनीहरूले परीक्षण गरिरहेका छन्। यस्ता ट्याक्सीहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र सरकारी अधिकारीको समर्थन लिनेबारे छलफल सुरू गरेका छन्। शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६
लडाकू प्रजाति चिम्पान्जीका केही आश्चर्य चिम्पान्जीलाई मानव जातिको पूर्खा मानिन्छ । मानिससँग सबैभन्दा बढी समानता र मेल भएको जनावर चिम्पान्जी हो । यसमा मानवजन्य केही बढी गुणहरु रहने र व्यवहार पनि सोही खालको देखाउने गर्दछ । मानिस आफ्नै प्रजातिमाथि बढी इष्र्यालु र शासक रहन चाहन्छ । तर मानिसमा हुने उच्च चेतनाका कारण मानव समाजमा ठूलाठूला बिद्रोहहरु हुने गरेका छन् । मंगलबार, असोज २८, २०७६
१ सय १८ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको छ यो बिजुली बल्ब आम रूपमा बिजुलीका बल्बहरु बढीमा डेढ दुई वर्ष टिक्छन् । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो बल्ब छ, जुन १ सय १८ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको छ । अहिलेसम्म यो बल्ब फ्युज भएको छैन । शुक्रबार, असोज १७, २०७६
परिवारका ११ सदस्य, आपसमा २३ पटक बिहे छिमेकी मुलुक चीनमा विवाह तथा डिभोर्ससँग सम्बन्धित एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । एउटा चिनियाँ परिवारका ११ सदस्यहरुले एक आपसमा २३ पटक बिहे गरेका छन् । तर दुई हप्ताको बीचमै सबैले एक अर्कासँग डिभोर्स पनि गरेका छन् । शुक्रबार, असोज १७, २०७६
यस्तो गाउँ, जहाँ एक सय २५ रुपैयाँमा घर पाइन्छ युरोपेली मुलुक इटालीमा गएर बस्ने कुरा हामी धेरैका लागि सपना जस्तै होला । तर यदि यो खबर पढ्नु भयोभने अवश्य पनि रोमाञ्चित हुनुहुनेछ। किनकी इटालीको सिसिलीको एक नगर परिषदले विदेशीहरुलाई त्यहाँ घरजम गर्न सघाउ पर्‍याउने निकै गज्जबको कार्यक्रम अघि सारेको छ । शुक्रबार, असोज १७, २०७६
इन्धन अभावका कारण श्रीलङ्कामा विद्यालय बन्दको घोषणा
इन्धन अभावका कारण श्रीलङ्कामा विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको छ । पहिलो चरणमा जुलाई ४ देखि एक साता बन्द गर्ने घोषणा गरिएको हो । लुम्बिनी टाइम्स मंगलबार, असार २१, २०७९
यातायात व्यवस्था कार्यालय बेलवासमा स्थानान्तरण लुम्बिनी टाइम्स सोमबार, असार २०, २०७९
रुपन्देहीमा हतियार सहित ३ जना भारतीय नागरिक पक्राउ लुम्बिनी टाइम्स सोमबार, असार २०, २०७९
लुम्बिनीको दानपेटिका खोलियो लुम्बिनी टाइम्स सोमबार, असार २०, २०७९
बुटवल मण्डपको नाम फेर्ने बुटवल उपमहानगरको प्रस्तावप्रति संघ सस्थाको असहमती लुम्बिनी टाइम्स आइतबार, असार १९, २०७९
नागरिकको विवरण सङ्कलन कार्य प्रभावकारी बनाऔँ : गृहमन्त्री खाण लुम्बिनी टाइम्स शनिबार, असार १८, २०७९
राज्यको सहुलियत लिन धेरै झन्झट व्यहोर्नु परेको महिला उद्योगीको गुनासो
वर्षाका कारण बुटवलको तिनाउ नदीमा बाढी
लोप हुँदै असारे भाका
जङ्गली च्याउ खाँदा बुटवलमा १५ जना बिरामी
यातायात व्यवस्था कार्यालय बेलवासमा स्थानान्तरण
Lumbini Creative Media Pvt. Ltd.
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नं.: २१२८
Butwal-9, Kalikapath, Nepal
[email protected] (Advt.) Phone: +977-71-437609, 9857021900, 9857032760 Web: www.lumbinitimes.com विज्ञापनका लागि
+977-71-437609, 9857021330, [email protected] हाम्रो बारेमा हाम्रो टीम
लुम्बिनी टाइम्स टीम